Njem Nlegharị Guyana iji mepụta Ntuziaka Green Travel to Guyana
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Guyana njem njem » Njem Nlegharị Guyana iji mepụta Ntuziaka Green Travel to Guyana
GTA nwere olile anya na ntuziaka nke Green Traveler na Guyana ga-eme ka ị matawanye ebe otu onye na-ege ya ntị
GTA amalitela Green Guide nke Guyana na Guyana iji gosipụta onyinye njem njem na-enweghị atụ
Green Traveler ga-emelite ntuziaka ahụ ma gbakwunye atụmatụ ndị ọzọ iji hụ na ọ na-enye ozi kachasị ọhụrụ maka ndị njem
Ntuziaka a bara uru maka ndị njem na-eme atụmatụ njem ha na-atụ anya na Guyana
The Guyana Tourism Authority (GTA) esoro ndị ọkachamara na ndị ọkachamara njem njem Britain, Green Traveler, mepụta Green Travel's Guide to Guyana.
Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị njem na-arịwanye elu banyere njem ha na-aga n'ihi na ha hụrụ uru gburugburu ebe obibi nke ọrụ mmadụ belata n'oge ọrịa na-efe efe - GTA ewepụtala Ntugharị Green Traveler na Guyana na mbọ iji gosipụta njem nleta na-enweghị atụ. na-enye ma na-adụ ndị njem ọdụ ka ha ga-esi gaa leta ọrụ ha nke ọma, na-ahapụ mmetụta dị mma ga-aga ebe a na-aga.
Green Traveler onye nchoputa, onye nta akụkọ na-emeri mmeri na onye njem njem nlegharị anya, Richard Hammond, soro ndị otu GTA mepụta Green Traveler's Guide to Guyana na ntuziaka mbido mbụ gosipụtara ihe osise mara mma, vidiyo mmeghe, ozi banyere ebe ịnọ. , ihe ị ga-eme na otu esi aga njem n'ụzọ kwesiri ekwesi, na ebe ihe osise. Green Traveller ga-ewelite ntuziaka ahụ ma gbakwunye atụmatụ ndị ọzọ iji hụ na ọ na-enye ozi kachasị ọhụrụ na mkpa maka ndị njem.
Guyana bụ ebumnuche nke guzosiri ike na njem ndị njem mba ụwa n'ihi mbọ ya niile iji jikwaa njigide ebe njem ahụ ga-ahụ ka ụmụ amaala obodo na-achịkwa ma na-enweta ọrụ eco-njem nke onwe ha na mpaghara Guyana. Enweela ego niile a na-enweta site na ọrụ ndị a n'ime obodo na mbọ nchekwa iji chebe ala nna nna ha ka ha nọrọ. Guyana ahọrọla ọtụtụ onyinye mba ofesi na-amata akara ngosi nke njem nlegharị anya nke ya gụnyere Onyinye Nlekọta inationlọ Ọrụ sitere na Caribbean Tourism Organisation (CTO), World 1 # “Best in Ecotourism” and “Best in Sustainable Tourism” si Latin American Travel Association ( LATA) Nrite Achievement Awards.
GTA nwere olile anya na ntuziaka nke Green Traveler na Guyana ga-eme ka mmata nke otu n'ime ndị na-ege ya ntị, ndị njem gburugburu ebe obibi, ma nyekwa ndị ọrụ na-eme atụmatụ njem ha na-eche na Guyana.
IMEX Q na A: Enwere ihe dika ihe na-esota?